Patrick Fugit – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
We BoughtaZoo (2011) မင်းသား Matt Damon နဲ့ Scarlett Johansson တို့ အဓိကပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစု ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Benjamin ဟာ အိမ်အကြီးကြီးတစ်လုံးကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး အဲ့အိမ်မှာ ZOO တစ်ခုပါနေပါတယ်။ သူ့သမီးကတော့ ဒီအတွက် အရမ်းပျော်ရွင်ကျေနပ်နေပြီး သူ့သားကတော့ သဘောမကျဘူး။ ဒီ ZOO ကြီးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ ၀န်ထမ်းတွေလိုအပ်ပြီး ငွေကြေးပြသာနာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာတဲ့ အခါ အများပြည်သူတွေကို ပြန်လည်ပြသဖို့ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရူ့ပါအုံး
IMDB: 7.1/10 126,986 votes
First Man (2018) အချိန်​ကာလကတော့ ၁၉၆၉ ခုနှစ်​ ….. ဇူလိုင်​လ ၁၆ရက်​ ၁၃:၃၂နာရီ ခန့်​ပေါ့………… စိတ်​ကူးယဉ်​ခဲ့ရတဲ့ လမင်းကြီးဆီကို သမိုင်းရဲ့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်​တော်​ ထွက်​ခွာသွားရတော့မှာ …. အောင်​မြင်​မှာလား ကျရှုံးမှာလား.. … ကျွန်​တော်​ ဆက်​မတွေးတော့ပါဘူး……. ဆုံးသွားတဲ့ ကျွန်​တော့်​ရဲ့သမီးလေးကို ဝမ်းနည်းစွာ သတိရနေတာလား…. ….ကျွန်​တော့်​ထက်​အရင်​ လကမ္ဘာကိုသွားရောက်​ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သူငယ်​ချင်းတွေရော.. .ကောင်းမွန်​တဲ့ဘုံဘဝမှာ ပျော်​ရွှင်​ကျေနပ်​နေပြီလား….. ဒါမှမဟုတ်​ ကျွန်​တော်​ပဲ ဒီအခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ စက်​နှိုးမဲ့အချိန်​ကို စောင့်​စားရင်း ခြောက်​ခြားနေမိတာလား … .ကျွန်​တော်​တို့ရဲ့ အမြင်​အာရုံကလဲ အကန့်​အသတ်​နဲ့ပဲမြင်​နေရတယ်​ လက်​တစ်​ဝါးသာသာလောက်​ မှန်​ပြတင်းလေးကနေ ကောင်းကင်​ကြီးကို မျှော်​ကြည့်​ရင်း ကမ္ဘာလောကကြီးကို နှုတ်​ဆက်​ထွက်​ခွာရတော့မယ်​ ကျွန်​တော်​ချစ်​ခင်​တဲ့ မိသားစုလေးကတော့ ကမ္ဘာမြေပေါ်က အိမ်​လေးထဲမှာ ကျန်​နေခဲ့မှာလေ ဘယ်​သူမှ မရှိတဲ့ လကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်​တော်​တို့ အထီးကျန်​နေမှာလား ပြီးတော့ ကမ္ဘာမြေပေါ် ပြန်​မရောက်​လာနိုင်​ခဲ့ရင်​ရော……. အဲ့လိုတွေးနေရင်းနဲ့ပဲ……ခရီးစဉ်​ထွက်​ခွာဖို့အတွက်​ တဆယ်​…..ကိုး….ရှစ်​……ဆိုပြီး… .အချိန်​မှတ်​နေတဲ့အသံကို ...